Indlu yaseNtabeni-Umbono omangalisayo
Indlu entle yosapho kwiindlwana zaseKarvounas. Ime kwindawo ebukekayo kumbindi weSipro (10' ukusuka eTroodos, 35' ukusuka eLimassol, 50' ukusuka eNicosia). Ngendawo yayo ekhethekileyo, ungonwabela ilanga ngaphandle kokuva ubushushu. Lolona khetho lufanelekileyo kwiindwendwe ezifuna ukuphumla kunye neendwendwe ezifuna ukuhamba ngeenxa zonke eCyprus !! Zonke iindwendwe zethu ziyakwazi ukujonga incwadi yesikhokelo ebonisa iindawo ezintle zokutyelela ezaziwa ngabantu basekuhlaleni kuphela!
Into yokuqala oya kuyiphawula yindlela ecoceke necoceke ngayo indlu yethu! Uya kuhlala unamaphepha acocekileyo, iitawuli ezicocekileyo kwaye okona kubaluleke kakhulu ivumba elimnandi nelikhaya!
Indlu inegumbi elinye lokulala elinebhedi ephindwe kabini kunye nebhedi eguqulwayo ibe yibhedi, igumbi lokuhlala elipholileyo (elineebhedi ezi-2 eziguqulwayo zibe yibhedi kunye nebhalcony enkulu eneentyantyambo nemithi. Ikhitshi lethu linazo zonke izinto (izixhobo zokupheka). kuhlalise abantu aba-5.
*Isofa eguqulwa ibe yibhedi
*Kubandakanya iShampoo kunye nejeli yeshawa
*Isitya sokuhlamba ngeMirror
*2 Isofa enkulu eba yibhedi
*ikhitshi elixhotyiswe ngokupheleleyo (iipleyiti, izitya, ifriji, njl.njl)
*izityalo ezintle (jonga umfanekiso)
4.63 ·Izimvo eziyi-217
4.63 · Izimvo eziyi-217
Ikufuphi kakhulu neTroodos (10') 10' ukusuka eKakopetria, 35' ukusuka eLimassol kunye ne-50' ukusuka eNicosia (ngemoto). Imozulu kule ndawo intle. Akukho airconditioning efunekayo. Unokulonwabela ilanga ngaphandle kokuva ubushushu beSipro. Ngapha koko, iithaveni zesiNtu zaseCyprus ezikufutshane eKakopetria naseTroodos. Kwakhona iindlela ezininzi zendalo (ingakumbi zokhenketho) kufutshane nendlu ukuze uphonononge !!! Nceda ujonge iQuidebook yam.
Nceda uzive ukhululekile ukundibuza nantoni na malunga nokuhlala kwakho phantse nangaliphi na ixesha. Kuluvuyo lwam ukukunceda ukonwabele ukuhlala kwakho kakhulu.